REENOEMANN: ဆု နဲ့ စူး
Posted by Ree Noe Mann at 2:20:00 AM
ဟေးးး ငါ ၁ ကွ အပေါ်ကမလာသေးတဲ့လူတွေကိုလဲ သနားတယ် ခိခိ ဘာလဲဘာလဲလာဖတ်မယ် ပြီးတော့တဂ်ထားမှန်းသိရင် စိတ်ဆိုးပြီး အော်သွားလိမ့်ဦးမယ် မြင်ယောင်သေးတယ် ဟဟဟဟဟ
လေးတန်းတတန်းလုံးမှာ ရီငိုပဲအောင်တယ်ဆိုတော့ တော်တယ် ပြောရမှာပေါ့...းP
မရောက်တာကြာလို့ စာလာဖတ်တယ် တက်ဂ်တာနဲ့ တိုးတယ် .. ကိုမိုးကုတ်သား အကြွေးတောင် မကျေသေး .. အဟင့် ရွှတ် :(
ဆု ဆူး စူးးးးးးးး
ကိုယ်... အင်း.... ပြောမထွက်ဘူး..
ချစ်တဲ့ သယ်ရင်းနားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
သယ်ရင်း ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းလာခဲ့
ကိုယ် ရွတ်ပြမယ်လေ... အဟတ်
ဖတ်ရတာ သဘာဝကျတယ် ရသစုံတဲ့ ကျောင်းသား ဘ၀ကို ရခဲ့တာပဲ ကောင်းလေစွ..!
အစ်ကိုရေ.. ဟီး.. အားနာလိုက်တာ.. ဒါနဲ့ ဆိုနှစ်ပုဒ်ရှိပြီ...ရေးရသေးတာ.. ဟီး. နေချင်တဲ့ မြို့လေးပါ ကျန်သေးတယ်.. ဒါလေးကို အရင်ရေးမယ်နော်...း)
အမ ဦးနှောက်မကောင်ဘူး မမှတ်မိဘူး ပြောထားတဲ့အတွက် မရေးလို့ရတယ်နော်၊ တော်ကြာ မမှတ်မိပဲ လျှောက်ရေးရင် လိမ်သလိုတွေ ဖြစ်မှာစိုးပါတယ်ရှင်၊
အပေါင်းအသင်းကောင်းရင် သောင်းကျန်းတတ်တယ်လားးးး။ ခုရော ကိုကြီး သောင်းကျန်းတုန်းလားးး။
ထစ်ခနဲရှိ အားကြီးတဂ်တာပဲ...အကြွေးတွေလည်း များနေပြီမျက်နာလည်းပူနေပြီဒီတပုဒ်တော့ လူလည်ကျ လိုက်မယ်..ရေးပြီးသားရှိတယ် လာလေရော့...
အားရပါးရကို တဂ်ထားတာပါလား .. :D
မှတ်မိတော့ဘူး မှတ်မိသလောက် ရေးပေးမယ် နော့း)
သြော်..တွေ့ပြီ.. ဒီအကြွေးကို.. မသိဘူးလေကွယ်.
မကြီးဝါရေ တက်ဂ်ထားပါတယ်ဗျို့လို့မှ လာမအော်တာကို.း)
အစ်ကို ကျွန်တော်လာလည်တာပါ .... အစ်ကို့ ဆူး ကျွန်တော့် ဆီ တစ်ပတ်လည်ပြီး လာစိုက် လို့.... ပိုင်ရှင်ဆီ အရောက်လာပြီး သွယ်ဝိုက် တက်ဂ်လေး လာဖတ်တာပါဗျာ ..... ခေါင်း တွေ လည်း ခြောက်နေပြီ ဘာရေးရမှန်း မသိလို့.... ဟဟ ခရီးသွားဟန်လွှဲ အစ်ကို့ တခြား စာတွေ ကိုလည်း ဝင်ဖတ်သွားပါတယ် ...... သိပ်လှတဲ့.... စာတွေပဲ ဗျာ .... နောက် လာလည်ပါဦး မယ် အစ်ကို ..... ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ .... (ရန်ကုန်သား)
မူပိုင်ရှင်ရဲ့ ပို့စ်ကို အခုမှ ဖတ်ရပါတယ်။ ဥာဏ်မကောင်းတာတော့ အစ်မလည်း တူတူပါပဲ (အစ်မကတောင် ပိုဆိုးဦးမယ်း)